အန္တရာယ်ကင်းကင်းချက်ပြုတ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အန္တရာယ်ကင်းကင်းချက်ပြုတ်ခြင်း
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Jan 14, 2014 in Editor's Choice, Health & Fitness | 52 comments
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် Food Safety ဟာလဲ တထောင့်တနေရာ ကနေလိုအပ်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ Food Safety လုပ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လန့်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အရမ်းလဲကုန်ကျစရိတ်များ မယ်လို့ပြောတဲ့သူကလဲပြောပါတယ်။ တကယ်ကတော့ Food Safety ဆိုတာ သေးသေးလေးကနေစရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြုံသလိုအသားကျနေတဲ့ နှမျောတတ်တဲ့ ကျွန်မတို့အဖို့ကတော့ အဲဒီသေးသေးလေးကိုတောင်လိုက်နာဖို့ခက်နေပါတယ်။ ကျွန် မကိုယ်တိုင်သင်တန်းတက်၊ သင်ကြားရေးတွေမှာပါဝင်နေပေမဲ့ ကိုယ်လဲလစ်ရင်လစ် သလိုချိုးဖောက်မိပါရဲ့။ အခုဒီပိုစ့်ကလေးကတော့ တနိုင်တပိုင် မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ် ဖြစ်၊ ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စွာ အစားအသောက်ပြင်ဆင်နိုင်အောင် ဗဟုသုတရစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး သိသမျှအချက်အနည်းငယ်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ အများကြီးမသိပေမဲ့ သိသလောက်ကလေးကိုတော့ အပိုင်းလိုက် ခွဲခြားတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Personal Hygiene လို့ခေါ်တဲ့ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု့ပါ။ ဒါကတော့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့လဲ သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆင့်လေးတွေ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက် နာသင့်တဲ့အချက်ကလေးတွေပါပဲ။ အစားအသောက်တာဝန်ယူချက်ပြုတ်ရတဲ့သူ ရဲ့ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု့ဟာတော့ နံပါတ်တစ်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ လိုက် နာသင့်တဲ့အချက်တွေကတော့ ချက်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးခေါင်းစွပ်အရင် စွပ်ရပါမယ်။ ရုပ်ရှင်တွေထဲလို ဆံပင်အလှပျက်မှာစိုးလို့စွပ်ရုံတင်စွပ် တာမဟုတ်ပဲ ဆံပင်မပေါ်အောင်ထိအားလုံးသိမ်းပြီးစွပ်ရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ အိမ်မှာဆို အိမ်ရှင်မအင်္ကျီလို့ခေါ်တဲ့ အေပရွန်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာတော့ ဂျူတီကုတ်လို့ခေါ်တဲ့ ဒူးဖုံးကုတ်အင်္ကျီအဖြူ ၀တ်ရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ မီးဖိုချောင်မှစီးမဲ့ဖိနပ်စီးရပါမယ်။ အဲဒီဖိနပ်နဲ့ အပြင်ထွက်လို့မရပါဘူး။ Head to Toe စနစ်နဲ့ ခေါင်းမှခြေထောက်အစဉ်လိုက်ဝတ်ရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ကိုင် တွယ်ချက်ပြုတ်မဲ့ လက်ကို လက်ဆေးတဲ့သီးသန့်ဘေဇင် ( အိမ်တွေမှာတော့ရှိ ဖို့မ လွယ်ပါဘူး ) မှာ Hot Running Water နဲ့ စက္ကန့် ၂၀ လောက်ဆပ်ပြာများများ သုံးပြီးလက်ချောင်းကြား၊ လက်သည်းကြားတွေကို လက်ကောက်ဝတ်ထိ သေချာ အောင်ဆေးရပါမယ်။ ပြီးရင်ရေကိုသေချာစွာခါပြီးတခါသုံးလက်သုတ်ပ၀ါ (အိမ်တွေ မှာတော့ တနေ့တခါလျှော်ရင်ပိုကောင်း ပါတယ် ) နဲ့ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ရပါမယ်။ နောက်ရှောင်ရန်ကတော့ ဟင်းချက်မဲ့သူဟာ မိတ်ကပ်၊ သနပ်ခါး၊ နှုတ်ခမ်းနီ လိမ်းခြင်း၊ လက်ဝတ်ရတနာဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ရေမွှေးဆွတ်ခြင်းများကိုရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ လက်သည်းအရှည်လဲမထားသင့်ပါဘူး။ ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်းမှာ မုန့်၊ ပီကေ၊ ကွမ်းယာစားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းများကိုရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ လက်အိပ်စွတ်ခြင်းကိုလဲရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ လက်အိပ်သုံးဖို့လိုတဲ့နေရမှာလဲတခါသုံး လက်အိပ်ကိုပဲသုံးသင့်ပါတယ်။ အအေးမိဖျားနာနေရင် ဟင်းချက်ပြုတ်ကိုင်တွယ် ခြင်းမပြုသင့်ပါဘူး။ ဓါးရှခြင်းအပါအ၀င်ထိခိုက်ရှနာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Skin Colour ပလာစတာမသုံးသင့်ပါဘူး။ တခြားအရောင်ပလာစတာသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစည်းမျဉ်းကတော့ ဒီနိုင်ငံမှာမလွယ်လောက်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ ပလာစတာတွေ အားလုံးက Skin Colour တွေချည်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဒါကတော့ အခြေခံအချက်က လေးတွေပါပဲ။
ဒါကတော့ အစားအသောက်တွေရောယှက်မှု့အကြောင်းလေးပါ။ အစားအသောက် မှန်ပေမဲ့ အတူတူထားလို့မရတာတွေရှိပါတယ်။ အစားအသောက်တွေကို အကြမ်း ဖျင်းအားဖြင့် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။
အန္တရာယ်ရှိအစားအစာ High risk Foods နဲ့
အန္တရာယ်နဲတဲ့အစားအစာ Low risk Foods ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။
အန္တရာယ်ရှိအစားအစာ High risk Foods ကိုတော့ နှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲထားပါတယ်။ Raw Food လို့ခေါ်တဲ့ အသားစိမ်းငါးစိမ်း ( မချက်ပြုတ်ရသေးတဲ့ အစားအစာ ) နဲ့ Ready to Eat Foods အသင့်စားအစားအစာ ( ထပ်ချက်လို့မရတော့တဲ့ အစားအစာ ) လို့နှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲထားပါတယ်။
ဒီ အန္တရာယ်ရှိအစားအစာ High risk Foods တွေကတော့ ဘက်တီးရီးယားကို အမြင့်ဆုံးသယ်ဆောင် ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ ပါတယ်။ အန္တရာယ်နဲတဲ့အစားအစာ Low risk Foods ဆိုတာကတော့ ဘက်တီးရီးယားမကြိုက်တဲ့ အစာခြောက်တွေကိုခေါ်ပါတယ်။ ဒီ Low risk Foods တွေကတော့ ဘယ်လိုထားထား ဘက်တီးရီးယား မပေါက်ပွား မပြန်ပွားနိုင်ပါဘူး။ High risk Foods ထဲမှာတောင်မှ Raw Food တွေဟာ ဘက်တီးရီးယား အန္တရာယ် ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ သတ်မှတ်အပူချိန်ရောက်အောင်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာသေသွားနိုင်ပါတယ်။ Ready to Eat Foods အသင့်စားအစားအစာ တွေကတော့ ထပ်ချက်လို့မရတော့တဲ့ အတွက် ချက်ပြီး ၄ နာရီအတွင်းမှာစားဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ပြီး ၄ နာရီအတွင်းမစားနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ လွှင့်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မပစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ စားမဲ့အချိန်အထိ ရေခဲသေတ္တာ သို့မဟုတ် အပူပေးလို့ရတဲ့ပေါင်းချောင်ထဲမှာ သတ်မှတ်အပူချိန် အတွင်းသိမ်းဆည်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
High risk Foods ထဲမှာတောင်မှ Raw Food တွေကို ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုရင် သတိထား ကိုင်တွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Raw Food တွေကို Ready to Eat Foods တွေနဲ့ရောထားလို့မရပါဘူး။ Raw Food ထဲက ဘက်တီးရီးယား တွေဟာ Ready to Eat Foods တွေထဲကို အလွယ်တကူကူးသွားနိုင်ပါတယ်။ သိမ်းမယ်ဆိုရင်တောင် ရေခဲသေတ္တာသီးခြား စီသိမ်းသင့်ပါတယ်။ အိမ်မှာတော့ ရေခဲသေတ္တာ တခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ချက်ခါနီး Chill လုပ်ထားတဲ့ Raw Food တွေကို အောက်အဆင့်မှာ ထားပြီး Ready to Eat Foods တွေကိုတော့ အပေါ်ဆင့်မှာထားသင့်ပါတယ်။ အဲလိုသေချာမသိမ်းဆည်းဘူးဆိုရင်တော့ အစားအသောက်တွေဟာ Cross Contamination ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုခွဲမသိမ်း မိပဲရောသိမ်းလိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ Ready to Eat Foods တွေကိုလွှင့်ပစ်ဖို့မနှမျောသင့်ပါဘူး။ Raw Food တွေကတော့ သတ်မှတ်အပူချိန်ရောက်အောင် ချက်ပြုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မပစ်လဲရပါတယ်။ အဓိကကတော့ အစားအသောက်တွေမပျက်စီးစေဖို့ အပူချိန်မှန်ကန်အောင် သိမ်းဆည်းသင့်ပါတယ်။ Ready to Eat Foods တွေဟာ လေးနာရီအတွင်းစားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မစားနိုင်သေးရင် သတ်မှတ်အပူချိန်အတိုင်းသိမ်းဆည်းထားသင့်ပါတယ်။ သိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာလဲ အပေါ်ကနေ ပလပ်စတစ်အကြည်လေးတွေ အုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ လှီးချွတ်ရမှာသုံးတဲ့ စဉ့်တီတုန်းတွေနဲ့ ဓါးတွေကို လှီးဖြတ်မဲ့ အစားအသောက် အလိုက်ခွဲခြားထားသင့်ပါတယ်။ အသားလှီးဖို့ ( Raw Food ) အတွက်တခု၊ အသင့်စာ အစားအစာ ( Ready to Eat Foods ) အတွက်တခု၊ အသီးအရွက်အတွက်တခု ဆိုပြီး စဉ့်တီတုန်းကော ဓါးကောခွဲထားသင့်တယ်။ Ready to Eat Foods တွေအတွက်တောင် စိုအတွက်တခု၊ အခြောက်အခြမ်း ( ဥပမာ ပေါင်မုန့် ) တွေအတွက် တခုဆိုပြီး ခွဲထားသင့်ပါတယ်။ သိပ်အများကြီး ခွဲမထားနိုင်ရင်တောင် တွဲမလှီးသင့်ပါဘူး။
ဒီတခုကတော့ ပြင်ပပစ္စည်းတွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သတိထားစရာအချက်တွေပါ။ အစားအသောက်တွေအတွက် အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ ပြင်ပပစ္စည်းတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အခုလိုအဆင့် သုံးဆင့်ခွဲထားပါတယ်။
ဆိုပြီးခွဲခြားထားပါတယ်။ အဲလိုအန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ ပြင်ပပစ္စည်းတွေ ကို အစားအသောက် ထဲမပါဝင်စေဖို့အထူးဂရုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး Chemical Hazards ကတော့ ချက်ပြုတ်မဲ့သူကိုယ်ပေါ်မှာ ဘယ်လို အမွှေးနံ့သာမျိုးမှ မသုံးသင့်ပါဘူး။ ရေမွှေး၊ After Shave မှအစ မိတ်ကပ်၊ သနပ်ခါး လုံးဝမလိမ်းချယ်၊ မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
အစားသောက်နားမှာ မှန်ကြည်ဆေးလိုအရည်မျိုး၊ ခြင်၊ ပိုးဟပ်ပြေး သောဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ အစွန်းချွတ်ဆေး၊ ဆပ်ပြာ များဖြန်းခြင်း၊ အနီးအနားမှာထားခြင်း တို့ကိုလဲ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ Physical Hazards ကတော့ Personal Hygiene မှာပြောခဲ့သလို မိမိတကိုယ်ရည် အသုံးအဆောင်တွေပါပဲ။ နားကပ်၊ လက်စွပ်၊ ကလစ်၊ ဘောပင်ဖုံး၊ သရေပင်၊ ဆံပင်အပါအ၀င် ကိုယ်ခန္ဓာ အမွှေးအမျှင် အစရှိသည်တွေကို မိမိအစားအသောက်ထဲမပါဝင်မိစေရန် သတိထားရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
ယခုလက်ရှိရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတဲ့ အဆိုးဆုံးအချက်ကတော့ မုန့်ဘူးတွေကို စတပ်ပလာ ညှပ်ပြီးပိတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မုန့်စားခါနီးမှာ အဲဒီ ချုပ်ထားတဲ့ စတပ်ပလာကလစ်လေးတွေကို ဖြုတ်ရတာပါပဲ။ ဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာ အရမ်းကို သတိထားရပါတယ်။ ဘယ်နှစ်ခုဖြုတ်လိုက်သလဲ၊ ကိုယ့်လက်ထဲမှာဖြုတ်စဘယ်နှစ်ခု ရောက်ပြီလဲ၊ အခုရေစုံရဲ့လား စစ်ဆေးရပါတယ်။ တခုလောက်ပျောက်နေရင် အဲမုန့်ကို မစားရဲသေးပဲ အဲဒီကလစ်ကလေးကိုတွေ့အောင်အရင်ရှာရပါတယ်။ တခါတရံအခန့်မသင့်ရင် ခွာနေရင် ကျိုးသွားတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဖြုတ်ရင်း အခန့်မသင့်ရင် ကျိုးပြီးအစားအသောက်ထဲပါသွား နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းကို အန္တရာယ်များ ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မသားကို ကလစ်တွေမဖြုတ်ခိုင်းပါဘူး။ မုန့်ဘူးနှုတ်ခမ်းတွေကို ကုန်အောင် ကပ်ကျေးနဲ့ညှပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါဟာလဲ Food Safety အတွက် မလုပ်သင့်ဆုံးလုပ်ရပ်ထဲမှာပါပါတယ်။ မုန့်ဘူးပိတ်ဖို့ စတပ်ပလာ အစား ဆယ်လိုတိတ်သုံးတာက ပိုသင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတခု Biological Hazards အနေနဲ့ အန္တရာယ်အရှိဆုံးကတော့ ဘက်တီးရီးယားပါ။ နောက် အဲလိုအန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ပြင်ပ အရာတွေကတော့ ဟင်းရွက်၊ ဆန်၊ ပဲ အစရှိသည်တို့မှာပါဝင်တဲ့ပိုးကောင်တွေ၊ တီကောင်တွေ၊ ပိုးဟပ်တွေ၊ ဟိုတခါရွာသူတယောက်ကြုံဖူးတဲ့ ပိုးဟပ်ချေး၊ အိမ်မြှောင်ချေး အစရှိတာတွေ မပါဝင်မိစေဖို့နဲ့ ခြင်၊ ယင်၊ ကြွက် မဖြတ်မနားစေဖို့ အထူးဂရုပြုကာကွယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Biological Hazards ထဲက အဆိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ ပေါက်ဖွားဖို့ အဆင့်လေးဆင့်လိုပါတယ်။ အဲဒါကတော့
Food လို့ခေါ်တဲ့အစားအသောက် ( အထူးသဖြင့် High risk Foods )
Moisture လို့ခေါ်တဲ့ ရေငွေ့ ( အဲဒါကတော့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အလုံအလောက်ရှိပါတယ် )
Time လို့ခေါ်တဲ့ အချိန် နဲ့
Warmth လို့ခေါ်တဲ့ အပူချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချက်လေးချက်ပြည့်စုံတာနဲ့ ဘက်တီးရီးယားဟာ စတင်ပေါက်ပွားလာပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားဟာ အခန်းတွင်းအပူချိန်မှာအသက်ရှင်နိုင်တာမို့ ချက်ပြုတ်ပြီးအစား အသောက် ( High risk Foods ) တွေကို နဲနဲလေးအထားမှာလိုက်တာနဲ့ အထက်ပါအချက်လေးချက်နဲ့ ချက်ချင်းကိုက်ညီသွားပြီး အဲဒီအစားသောက်တွေမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ သန်းနဲ့ချီပြီး လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာပေါက်ပွားလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှ ဘက်တီးရီးယားအကြောင်းအသေးစိတ်ထပ်ရေးပါအုံးမယ်။
ဘက်တီးရီးယား တွေဟာ -18°C မှ 5°C အတွင်း မပေါက်ပွားနိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီး 63°C မှ 75°C အတွင်းမှာလဲ မပေါက်ပွားနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ 5°C မှ 63°C အတွင်းမှာ တော့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ အတော်ပျော်ပျော်ကြီးပေါက်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့မြန်မာစကားပုံ မှာ ခြင်ယင်မနားပူပူစားလို့တောင်အဆိုရှိ ခဲ့ပါတယ်။ အစားအသောက်တွေဟာ ချက်ပြီးပြီးချင်း၊ ကြော်ပြီးပြီးချင်း ပူတုန်းမှာပဲစားသင့်ပါတယ်။ ပူရာမှနွေးသွားတာနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ စတင်ပေါက်ပွားလာပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ စပေါက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီး မိနစ်နှစ်ဆယ်ပြည့်တိုင်း နှစ်ဆပွားသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအသောက်တွေဟာ ချက်ပြုတ်ပြီးချိန်မှ စားသုံးတဲ့အချိန်ကွာဟသွားတာနဲ့အမျှ အစားအသောက်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဟာလဲ ပေါက်ပွားနှုန်းဟာလဲ နှစ်ဆတက်လာတာမို့ အစားအသောက်ထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားပါဝင်မှု့ဟာ ပိုမိုများပြားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအသောက်တွေကို ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ပြီးပြီးချင်း မစားနိုင်သေးဘူးဆိုရင် အပူချိန် 5°C အောက်မှာပဲရှိနေအောင် ထိန်းသိမ်း သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါတယ်။ စားမယ့်အချိန်ဟာလေးနာရီအတွင်းပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်း စားမယ်ဆိုရင် 5°C အောက်မှာပဲရှိနေတုန်းစားရပါမယ်။ ပူအောင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ 63°C ရောက်အောင် မီးဖိုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ microwave နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပူသွားအောင် နွေးရပါမယ်။ ဒါမှရောက်ပြီးသား ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခဲထားမယ့် အစားအသောက်တွေအတွက်ကတော့ အနဲဆုံး -18°C ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Chill လုပ်ထားတဲ့ အသားငါးအစိမ်းတွေ၊ Ready to Eat Foods တွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကတော့ အနဲဆုံး 5°C မှာသိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုပူသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘက်တီးရီးယားစပေါက်ပွားပြီလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေခဲသေတ္တာထဲက ဟင်းကျန်တွေကို ပြန်မနွှေးပဲ အခဲပျော်အောင် အခန်းအပူချိန်နဲ့ထားပြီးစားတာဟာ အန္တရာယ်ကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘက်တီးရီးယားပေါက်ပွားဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်လေးချက် ( Food, Time, Moisture and warmth ) ကို ပြည့်ဝအောင် အားဖြည့်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာတော့ Temperature Probe လို့ခေါ်တဲ့ အပူချိန်တိုင်းတဲ့အတံလေးနဲ့ တနေ့နှစ်ကြိမ် ( သို့မဟုတ် ) သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိုင်း အစားအသောက်တွေရဲ့ Core လို့ခေါ်တဲ့ အလည်ခေါင်တည့်တည့်ကို ထိုးတိုင်းကြည့်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန်ကျော်သွားတာနဲ့လွှင့်ပစ်ဖို့ ညွှန်ကြားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီမှာကတော့ အဲလောက်မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သံသယဖြစ်စရာအစားအသောက်တွေဆိုရင်တော့ လွှင့်ပစ်ဖို့ ၀န်မလေးသင့်ပါဘူး။ မိမိရဲ့ မိသားစုကျန်းမာရေး၊ မိမိဆိုင်စားသုံးသူများရဲ့ကျန်းမာရေးကို ရှေးရှု့ပြီး လွှင့်ပစ်ဖို့ သတ္တိတွေမွေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဒီကြောင်းအရာတွေကို ခြုံပြီးပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့အစားအသောက်တွေဟာ 5°C မှ 63°C အတွင်းမှာမရှိသင့်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန်ကိုသေချာပေါက်လိုက်နာဆောင်ရွက်စားသောက်သင့် ပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ အခန်းတွင်းအပူချိန်မှာပဲ ဟင်းတွေကို ကြာရှည်ထားစားမယ် ဆိုရင်တော့ Food, Time, Moisture and warmth ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံသွား ပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေပျော်ပါးနေတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားသောက်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန် 75°C ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ဘက်တီးရီးယားတွေ အားလုံး ဟာသေကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းရေးကတော့ အများကြီးပြောစရာတော့မရှိပေမဲ့ အချက်အနည်းငယ်တော့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ မိမိကုန်ကြမ်းသိမ်းဆည်းရာနေရာ၊ ချက်ပြုတ်တဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်၊ ချက်ပြုတ်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ အကူပစ္စည်း ( ဒယ်အိုး၊ ဒန်အိုး၊ စဉ့်တီတုန်း၊ ဒါး၊ ဇွန်း အစရှိသဖြင့် ) တွေရဲ့ သန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်တွေ ( ကုန်ကြမ်း၊ ကုန်ချော ) ရဲ့သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှု့ကိုလဲ အထူးဂရုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ချက်ပြုတ်ပြီးချိန်မှာ မိမိချက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်၊ အကူပစ္စည်း များကို အဆင့်ခြောက်ဆင့်နဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် တစ်အနေနဲ့ Pre Clean လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ပြီးထွက်လဲတဲ့ အမှိုက်၊ စားကြွင်းစားကျန် တွေကို အရင်သန့်စင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်နှစ်အနေနဲ့ Detergent လို့ခေါ်တဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးကြောတဲ့ အဆင့်ပါ။ မှန်ကန်တဲ့အချိုးနဲ့ရောစပ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာရည်ကို တခါသုံးအ၀တ်စ ( ဒါမှမဟုတ် ) သန့်စင်တဲ့ အစနဲ့ ဆေးကြောရပါမယ်။
အဆင့်သုံးအနေနဲ့ကတော့ Rinse with running hot water နဲ့ပြောင်အောင် ဆေးပေးရမှုာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်လေးအနေနဲ့ကတော့ Disinfectants နဲ့ပိုးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ( Disinfectants ) ကိုရောစပ်ရာမှာလဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးအတိုင်းရောစပ် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်ငါးအနေနဲ့ကတော့ အပြီးသတ်ရေဆေးချခြင်း ( Final Rinse ) ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်ခြောက်အနေနဲ့ကတော့ Air Drying ဖြစ်တဲ့လေနဲ့အခြောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကို အ၀တ်နဲ့ခြောက်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းမှလွဲလို့ ချက်ပြုတ်ရာမှာသုံးတဲ့ အကူပစ္စည်း များကိုတော့ လေနဲ့သာအခြောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမှာ မြင်နိုင်တဲ့ အညစ်အကြေးရော မမြင်နိုင်တဲ့ အညစ်အကြေးကို ပါ သန့်ရှင်းအောင် အထူးဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှိုက်ပုံးဧရိယာကိုတော့ အထူးသန့်ရှင်းအောင်ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှိုက်ပုံးကိုတော့ အဖုံးပါတယ်သုံးသင့်ပါတယ်။ အဖုံးမပါရင်တော့ တနေ့စာတနေ့မှန်မှန်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ပစ်တဲ့နေရာမှာလဲ အိတ်ကို လုံခြုံအောင် စည်းနှောင်ပြီးပစ်သင့်ပါတယ်။ ခွေး၊ ကြောင်၊ ပိုးဟပ်၊ ကြွက်၊ ယင် အစရှိသော အကောင်တွေ အမှိုက်ပုံးနားလာလို့မရအောင် ကာကွယ်သင့်ပါတယ်။ အထူးဂရုစိုက်ရမှာကတော့ သန့်ရှင်းရေးသုံး Chemical တွေကို အချိုးအစားမှန်ကန်အောင် ရောစပ်ပြီး လုံခြုံစွာသီးခြားသိမ်းဆည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမှာ အသားစိမ်းငါးစိမ်းကိုင်တွယ်ခုတ်ထစ်တဲ့ နေရာကို နောက်ဆုံးမှသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အစားအသောက်တွေကို ကြာရှည်စွာသိုလှောင်ထားမယ့်သူများ၊ ပမာဏများပြားစွာမှာယူသိမ်းဆည်းမယ့်သူများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အရောင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ကုန်ထုပ်စက်ရုံများ၊ သင်္ဘောများအတွက်ရည်ရွယ် ထားတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲလို ပမာဏအများအပြားမှာယူမှု့တွေကို လက်ခံရမဲ့သူတွေက အောက်ပါအချက်ခြောက်ချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှလက်ခံ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်မှန်ရောက်ရှိမှု့ရှိမရှိစစ်ဆေးရပါမယ်။ သတ်မှတ်ချိန်တွင်းမရောက်ရင် အဲဒီအစားအသောက်တွေကို အထပ်ထပ်သေချာအောင်စစ်ဆေးရပါမယ်။
C – Check Vehicles and Personal
လာပို့တဲ့ကားသန့်ရှင်းမှု့ရှိမရှိ နဲ့ လာပို့တဲ့သူရဲ့ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု့ရှိမရှိ စစ်ဆေးရပါမယ်။
C – Check for Cross Contamination
အစားအသောက်တွေကို သီးခြားခွဲသယ်ဆောင်လာခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် High risk Foods နဲ့ Low risk Foods တွေကို ရောသယ်လာသလား၊ ခွဲခြားသယ်ဆောင်လားသလားစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
E – Examine Dates and Packaging
ထုပ်လုပ်တဲ့ရက်စွဲ၊ ကုန်လွန်မဲ့ရက်စွဲကို သေချာစွာစစ်ဆေးရပါမယ်။ ယူဆောင်လာတဲ့ အထုပ်တွေကိုလဲ ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ဗူးတွေပိန်ခြင်း၊ အရည်ယိုထွက်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
P – Probe the temperature
သယ်ဆောင်လာတဲ့ အစားအသောက် High risk Foods တွေကို အပူချိန်မှန်ကန်အောင် သယ်ဆောင်လာခြင်းရှိမရှိကို အပူချိန်တိုင်းကိရိယာဖြင့် စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်မှသာ လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
T – Transfer to Storage
အထက်ပါအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှန်ကန်ပြီဆိုရင် အစားသောက်တွေကို လက်ခံပြီးတာနဲ့ သိမ်းဆည်းရမယ့်နေရာကိုချက်ချင်းပို့ဆောင်ပြီး စနစ်တကျ မှန်ကန်အောင်သိမ်းဆည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ သန့်ရှင်းကျန်းမာတဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အခြေခံအချက်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အချက်တွေဟာ လိုက်နာဖို့ခက်ခဲနိုင်ပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်နာနိုင်တာလေးတွေကို လိုက်နာပြီးချက်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ မိသားစု၊ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျန်းမာသန့်ရှင်းတဲ့ အစားအသောက်ပတ်ဝန်းကျင်တွေရရှိနိုင်ပြီး ရောဂါကင်းဝေးနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မလေးဗျာ..ကျေးဇူးကြီးပါ့ တီသဲရယ်…ဖတ်ထားမှတ်ထားရမယ်…. မချက်ရဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး….ချစ်မြတ်နိုးလေးစားရပါသော ကျော်တို့အစ်ကိုကြီးကျောက်စ် အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး …အာဟိ
လိုက်နာနိုင်သလောက်တော့ လိုက်နာတာအကောင်းဆုံးပဲဆြာဆောရေ။ ကိုယ်ပဲချက်ချက်၊ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာပဲချက်ချက်၊ ဆိုင်ပဲဖွင့်ဖွင့်လိုက်နာနိုင်ရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူလဲကျန်းမာသပေါ့လေ
အများကြီး မသိပေလို့သာပဲ မသဲရယ်။
မသိပဲ မှားလိုက်နိုင်တာလေးတွေ၊ လိုက်နာရလွယ်ကူတာလေးတွေမို့ လူတိုင်း သိထား မှတ်ထားရင် အကျိုးများပါတယ်။
နဲနဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိစေချင်လို့ပါမမရေ။ အထူးသဖြင့်စားသောက်ဆိုင်တွေသွားရင် အူယားလွန်းလို့ပါ။ ဟိုတနေ့ကပဲ သန့်ရှင်းမှု့ကိုဦးစားပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ YKKO ( ဆိပ်ကမ်းသာ ) မှာ အနောက်ထဲဝင်ကြည့်လိုက် တာနောက်ကိုဘယ်တော့မှသွားမစားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လဲဒီပိုစ့် က လေးရေးဖို့တွန်းအားဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။
ကောင်းသောပညာပေးပိုစ့်လေးမို့ ကြိုဆိုပါတယ် ဒေါ်သဲရေ။
မှတ်သားက ဆက်လက်ဖြန့်ဝေအုံးမယ်နော် ရတယ်ဟုတ်။
အိမ်ရှင်မ မရှိသော လူပြိုကြီးအတွက် တကယ်တန်ဘိုးရှိပါ့ဗျာ ၊
အိမ်မှာ ဈေးဝယ် ချက်ပြုတ် အနော်လုပ်နေရသမို့ပါ ၊
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်သလောက်ကလေးလုပ်စေချင်ပါတယ် ကိုမျိုးသန့်ရေ။ သမီးလေးတွေကိုလဲ ဝေမျှပေးလို့ရပါတယ်။
အိမ်ရှင်မ ကို ဒီ ဗဟုသုတ နဲ့ ဆရာ သွားလုပ်လို့ လဲ မဖြစ်ပေဘူး
ကဲ ကဲ တော် .. မောင်မင်းကြီးသား .. ကွကိုယ်သာချက်တော့ ..ဆို … သေရော ..
ပါးပါးလေး ပုတ် မှ ဖြစ်မယ် …
ဟုတ်ကဲ့ ပါးပါးလေးနဲ့ တခုချင်းစီ ဖြည်းဖြည်းပုတ်ပါလေ
နတ်သမီး တစ်ထောင်ခန့်ကို သင်တန်းပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေလား ခင်ဗျ။
နာ့ဆီလွှတ်လိုက်ပါအေရယ်။ ဒီဟာကောဟိုဟာကော တတ်သင့်တတ်ထိုက်တာအကုန်သင်ပေးလိုက်မယ်
သိရတဲ့အတွက် ဗဟုသုတတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်နိုင်တာကလွဲပြီး လက်တွေ့လိုက်နာဖို့က မြို့ပြလူနေမှုစနစ်တွေမှာလလောက်ပဲ အဆင်ပြေမယ်။’ဒါတောင် ငွေကြေးအရလည်း သင့်တော်တဲ့ဝင်ငွေရှိဦးမှ
လက်တွေ့မြန်းတျန့်လူနေမှုစနစ်မှာက အေပရွန်ကိုဝယ်ဖို့တောင် စဉ်းစားရမယ့်အခြေအနေတွေနဲ့ဘ၀တွေ။
ထင်းမီးနဲ့ချက်၊ ပြာတွေ ဖုန်တွေဟင်းအိုးထဲဝင်၊အသားငါးနယ်ထားတဲ့လက်နဲ့ပဲ ဆားအိုး၊အချိုမှုန့်အိုးနှိုက်၊
အသီးအရွက်တွေကို ရေထဲဗြန်းဗြန်းနှစ်ပြီး ငပိရည်နဲ့မြှုပ်
ကိုယ်တိုင်ကတော့ တတ်နိုင်သလောက် လိုက်နာဖို့ မှတ်သားထားတဲ့ထဲ သိမ်းလိုက်ပြန်ပြီ။
တကယ်တော့မြို့ကလူတွေလဲသိပ်တော့လွယ်ကူလှတယ်မဟုတ်ပါဘူး ညီမလေးရယ်။ မိုးလင်းမိုးချုပ်ထွက်နေရတဲ့သူတွေအဖို့ ညမနက်ပေါင်းချက်ကြရတာချည်းပါပဲ။ အသေးစိတ်မဟုတ်တောင် နဲနဲလေးသတိပြုမိလဲမဆိုးပါဘူးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးရယ်၊ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်မယ့်သူများရှိရင်လဲ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးသိစေချင်လို့ပါ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါး ။ သေချာ ပြုစုထားတာဘဲ ။
ဟဲ ဟဲ ၊ မွသဲ က ၊
Certification of Ships’ Cooks Convention, 1946 များ ရထားသလားဘဲ ။
” ကျွန်မ ကိုယ်တိုင် သင်တန်းတက်၊ သင်ကြားရေးတွေမှာ ပါဝင်နေပေမဲ့ ”
သင်တန်းမှာ ကိုယ်တိုင် ဝင်ပြီး စာပြနေတာလား ။
” Ready to Eat Foods အသင့်စားအစားအစာ တွေကတော့ ထပ်ချက်လို့မရတော့တဲ့ အတွက် ၊
ချက်ပြီး ၄ နာရီအတွင်းမှာစားဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ချက်ပြုတ်ပြီး ၄ နာရီအတွင်းမစားနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ လွှင့်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ”
ပို ရှင်းလင်းအောင် ပြောရရင်တော့ ၊
စားဖိုမှူး တစ်ဦးက ချက်ပြီးတဲ့ ဟင်း / မုန့် ( ဘယ် အစား အစာ မဆို ) ၊
အပြီး ချက်ပြီး ( စားဖို့ Ready ဖြစ်ပြီး ) ၄ နာရီ အတွင်းမှာ အပြတ် စားရပါတယ် ။
၄ နာရီ ကျော်သွားရင်တော့ လွှင့်ပစ်ရပါတယ် ။
အဘ အခုစီးခဲ့တဲ့ Cruise သင်္ဘောမှာလဲ ဒီ Standard ပါဘဲ ။
သူတို့ Buffet ကျွေးတဲ့ အချိန်ကို ၄ နာရီ လောက် မှန်းဖြတ်ထားလေ့ရှိပါတယ် ။
မကုန်ဘဲ ကျန်တဲ့ဟင်းတွေ အကုန် လွှင့်ပြစ်ပေါ့ ။
သူတို့ကတော့ ရေခဲသေတ္တာ သို့မဟုတ် ပေါင်းချောင်ထဲ မှာတောင် ၊
လုံးဝ ကို သိမ်းမထားဘူး လို့ ပြောပါတယ် ။
အိုင်ယာလန် သင်ရိုးညွှန်းတန်းပါအဘရေ။ Food Hygiene သီးသန့်သင်တန်းလေးတခုဖွင့်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သင်တန်းလေးတက်ပြီးရင် တခုခုလေးကျန်ခဲ့လဲမဆိုးဘူးဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလေးပါ။ အခုဟာက စားသောက်ဆိုင်တွေသွားရင် ပြောချင်တာအူကိုယားနေတာပဲ။ အဲတော့ တက်ချင်သိချင်သူများအတွက်အတန်းလေးတခုရည်ရွယ်ထားတာပါ။ လောလောဆယ်တော့ တခြားသင်တန်းကလေးမှာပဲ အချက်နဲနဲညှပ်ထည့်ထားပါတယ်။
ဒီ လထဲဖတ်မိသမျှတော့ အကြိုက်ဆုံး ပို့(စ) ပဲ။။
ဒီ မနက်တင်ဖတ်မိတာလေး ရှယ်လိုက်ဦးမယ်.။
8 signs of good quality food တဲ့။
1) Grown without pesticides and fertilizers
2) Organic, not genetically modified
3) Contains no added growth hormones, antibiotics, or other drugs
4) Does not contain artificial ingredients or preservatives
6) Did not come fromafactory farm
7) Grown with the laws of nature in mind – meaning animals are fed their native diets and have free-range access to the outdoors.
9) Grown inasustainable way – using minimal amounts of water, protecting the soil from burnout, and turning animal wastes into natural fertilizers.
ချွေးမွလေး ဝေမျှတာကိုလဲ ကူးယူမှတ်သားသွားပါတယ်
မွသဲ ဝှက်ထားတဲ့ လက်သည်းတွေထုတ်လိုက်တာ အခုမြင်ရပြီ…
ပြောမည့်သာပြောရတာ မြန်တျန့်တင်မဟုတ် နိုင်ဂျံကားမှာတောင်…
စားဖိုဆောင်ကိုဝင်မိရင် ထားသိုပုံကိုကြည့်ပြီး စားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး…
အဲဒါကြောင့် ကွကိုယ်ပဲ ချက်စားဖြစ်တာကြာပေါ့…
စားဖိုဆောင်ကို အဆင့်မြှင့်ရရင်… ဟမ်မယေး… ဂိ
အကောင်းဘက်ကလှည့်တွေးရင်လည်း Immune System မြင့်သပေါ့ဗျာ…
မီးဖိုချောင်ထိတော့အဆင့်မမြှင့်လဲ ရှိတာလေးနဲ့ ဖြစ်အောင်လေးပေါ့လုပ်စေချင်လို့ပါ။ ဒါ့ထက်ဇဂါးမစပ် နှစ်ကိုယ်တူချက်သမျှလေးတွေ ကိုလဲဝေမျှပါအုံး။
Bravo Ma Ma Thel! studied and printed :))
မနက်ပိုင်း ၇ နာရီလောက်မှာ အပြီးချက်ပြီးသားဟင်းကို ထမင်းချိုင့်ထဲထည့်ယူလာပြီး စားဖြစ်တဲ့အချိန်က နေ့လည် ၁၂ နာရီ … ၄ နာရီကျော်အောင်ထားပြီးမှ စားဖြစ်တယ် …
တစ်ခါတစ်လေများဆို အဲဒီဟင်းကိုပဲ ညနေစာပါ စားရတယ် ..
မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့ ပြန်နွေးရင်ရော ကောင်းပါ့မလားလို့ သိချင်မိတယ် ..
အင်း မဝေရေ မိုက်ခရိုဝေ့ကတော့ ဘာ ဆိုက်အဖက်ရှိလဲမသိသေးတော့ အခုကတော့ မိုက်ခရိုဝေ့အားကိုး နဲ့လုပ်နေဆဲပါ။
တကယ့်ကို ဗဟုသုတ ရစေတဲ့ပိုစ့်နဲ့ ကွန်မန့်တွေပါပဲ
အင်မတန် ကောင်းတဲ့အဖိုးတန်ပို့စ်လေးအတွက်..ဗရာဗိုပါ မွသဲရေ…
ဟုတ်တယ် ဦးမိုက်ရေ။ တကယ့်နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်တွေမှာတောင် အလှမ်းဝေးနေဆဲမို့ :byee:
(အပူချိန် 75°C ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ဘက်တီးရီးယားတွေ အားလုံး ဟာသေကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။)
ဆိုတာက ဘက်တီးရီးယားထဲမှာ မှိုပါ ပါသလား။ မှိုသေတယ်လို့ ဆိုလိုတာလား။
တအားကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးမို့လို့ သေချာကို ကူးထားပြီး နေ့လည်က ဖတ်နေတာ။ ကွန်ပျူတာရှေ့ ကြာကြာ မထိုင်နိုင်ဘူးလေ။
ဟုတ်ကဲ့ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ပါတ်သက်လို့ဆောင်းပါးသီးသန့်တပုဒ်ရေးဖို့ရှိတယ်အမမျှစ်ကြော်ရေ။ ဘာသာပြန်ဖို့ပျင်းနေသေးလို့ ဟီဟိ သိပ်တော့မကြာတော့ပါဘူး။
သိသလောက်တော့.. မှိုက.. အသက်ရှိမှမဟုတ်တာ…
ပြောရရင်.. ငရုပ်သီးမှိုက.. အဆိပ်ဗျ..။ အဲဒါအသဲသွားပြီး အဆိပ်တက်တော့..အသဲကင်ဆာဖြစ်ရော..။
အဆိပ်(ဓာတုဓါတ်ပေါင်း) ကို တော်ရုံအပူနဲ့တော့ ဖြိုခွဲနိုင်မယ်မထင်..။
မှိုကို.. ဆိုက်ယာနှိုက်အဆိပ်လိုမျိုးသဘောထားလိုက်ရင်.. အဖြေတခုထွက်မယ်ထင်တာပဲ..
မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်သဘောက.. လေထု/ဒြပ်ထုထဲကရေငွေ့ကို.. တုန်ခါမှုနဲ့..အပူဖြစ်စေတာမို့… ဘာဓါတ်ရောင်ခြည်မှ မပါတာကိုး..။
မြန်မာတွေ သာမန်လူနေမှုသက်တမ်းရှည်ချင်ရင်.. မီးဖိုချောင်ကစပြုပြင်ရမှာပါပဲ..။
မသေပေမဲ့ခဲထားရင် ပြသနာမရှိတာလေးတွေရှိတယ်သဂျီးရဲ့။ အိပ်ခိုင်းထားတာပေါ့။ သို့သော် အားလုံး အန်တရယ်ရှိတယ်လဲမဟုတ်ပြန်ဘူး။ အဲဒါလေးနောက်မှထပ်သီးခြားတင်ပေးပါ့မယ်။ မြန်မာ့မီးဖိုချောင် ကတော့သဂျီးရယ် ကျွန်မမီးဖိုချောင်တောင် တစတစအတော်ပြင်နေရတာ။ ခုထိနိုင်သေးဘူး။ သူများတွေဆိုရင်တော့
ခုလို ပိုစ့်လေးတင်ပေးတာ မသဲကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်….။ ပြန်ပြန်ဖတ်လို့ရအောင် Copy/Paste ထားပါကြောင်းးးးး
စာဖတ်ပြီး ဆိုက်ကို ဖြစ်သွားမိတာတော့ အမှန်ပဲ…
ပြောထားတဲ့တစ်ချက်နဲ့မှ မညီတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘက်တီးရီးယားတွေ နေ့တိုင်း စားနေမိတယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ်…
တကယ်အကျိုးရှိတဲ့ပို့စ်ပါ… အခုတော့ အနည်းဆုံး သတိလေးထားပြီး ဆင်ခြင်ရမှာတွေကို သိသွားတယ်..
ထမင်းဗူးထဲ ထမင်းထည့်လာပြီး နေ့လည်ကျမှ အေးစက်စက်တွေကို စားဖြစ်တာ… တော်တော်လေး အန္တရာယ်ရှိနေတယ်နော်..
အောင်မယ်လေး ဆိုက်ကိုကတော့ ဒီစာအုပ်လေ့လာ သင်တန်းတက်ပြီးကတဲက၀င်တော့တာပဲ။ အခုဆို တခုခုစားတော့မယ် ဆိုင်တခုခုဝင်တော့မယ်ဆို ဒီစာတွေခေါင်းထဲအလိုလိုဝင်လာပြီး စားဖို့တွန့်တွန့်သွား တာ။ စားသောက်ဆိုင်တွေနောက်ဖေးဝင်မကြည့်ရဲတာတွေဖြစ်လာတယ်။ Toilet ၀င်ချင်တာတောင် တခုခုမြင်မိမစိုးလို့မသွားရဲတော့အောင်ကိုဖြစ်သွားတာပါအေရယ်။ ဟိုနေ့ကတော့ မနေနိုင်လို့ ၀င်လိုက်မိပါတယ် နောက်ကိုအဲဆိုင်လုံးဝမစားတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားတာ ဆိုးချက်
ထမင်းဗူးအနေနဲ့ကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် အနွေးထိန်းဗူးဝယ်သုံးတာတော့ပို Save ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေ။ သို့သော် အဲဒီအနွေးထိန်းဘူးတန်ဖိုးကလဲမသေးလေတော့ ခက်တာပေါ့။ သို့သော်လဲ သူကတခါရင်းပြီးရင်တော့ ဘက်စုံ Save ဖြစ်နိုင်သမို့ ၀ယ်ထားသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ချသွား ရတော့ ရောဂါ ဖြစ်လာရင်ဆေးကုရမှာနဲ့ တန်တယ်လို့ပဲတွက်ဆရတာပေါ့လေ။
စားစရာမရှိတာနဲ့ ခြံထဲက နမဒဂေါင်
. ထုပြီးတော့ ချက်စားမယ်အလုပ်
ရှိတဲ့အိုးက သတ္တုအိုး ဆိုတော့ ကျမ္မာရေးထိခိုက်မယ့်သဘောရှိပြန်ရော
ဆီတွေ အချိုမှုန့်တွေ ငရုပ်ကြက်သွန်တွေကလည်း
အောင်မယ်လေးဘွပုရယ်အစိမ်းစားမင့်ဟာ သတ်များနေသေး။ အကောင်လိုက်မောင်းသွင်းလိုက်ပီးရောဟာ ကို
ရုံးနားက ဟိုတယ်ရဲ့ စားသောက်ဆိုင် နောက်ခန်းမှာတော့…
ကိုက်လန်ရွက်ပုံ ဖင်ခုထိုင် စဉ်းနှီးတုံး ကြမ်းပြင်ချလို့ ကြက်သားခုတ်
ကိုယ်မှာထားတာက ကိုက်လန်ကြော် နဲ့ ကြက်မျိုးစုံ အကြော်အချက်တွေ…
ခုတော့ အိုက်ဆိုင် မရှိတော့ပါ…
Central Hotel ရဲ့နောက်ကမြန်မာထမင်းဆိုင်လား မအိရေ။ တခါပဲသွားစားပါတယ် ကန်စွန်းရွက်တွေကို ညစ်ညစ်ပါတ်ပါတ်လုပ်နေတာတွေ့တာနဲ့နောက်တခါသွားမစားရဲတော့ဘူးရယ်။ အများကြီးပဲလိုနေသေး တယ်မအိရယ်။ စားသောက်ဆိုင်ရောက်ရင်နောက်ဖက်ထဲမ၀င်ရဲဘူး။ မမြင်မိရင်တော်သေး မြင်လိုက်မိ ရင်တော့ နောက်တခါမသွားချင်တော့ဘူးရယ်။ ကိုယ်ပဲငတ်ကော
အန္တရာယ်ကင်းချင် မစားနဲ့.. များများကင်းချင် နည်းနည်းစား.. နည်းနည်းကင်းချင် များများစား.. ရှင်နေတာပဲ..
အူးးကြောင်လဲဘာမှမစားနဲ့နော် အတက်ရှည်ရှည်နေရအောင်လို့ သာမီးလေးတွေလဲချမ်းသာပေး ဟေးဟေး
အန်တရယ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုဝယ်စားရမတုန်းဗျ ဆိုတော့ လမ်းဘေး လေးဘန်းတော့ရှောင်ပေါ့ကွယ်
ဆုရခဲ့တာ ကို Congratulations လုပ်ဖို့ နောက်ကျနေတာ Sorry ပါ။
အခုမှ ဖတ်ရတာ မို့ ။
ဝမ်းတစ်လုံးကောင်း ခေါင်းမခဲ ဆိုတာမို့ စားတဲ့ အစာ တင်မက အဲဒါတွေကို ပြင်ဆင်တာ မှာလဲ သန့်ရှင်းဖို့ အရေးကြီးတာ အမှန်ပါ။
အဖိုးတန်တဲ့ လက်တွေ့ကျကျ သုံးသင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေး တွေပါ။
တစ်ချို့ အကြောင်းတွေ အခုမှ သိရတာမို့ ကျေးဇူးပါနော်။
သဲနု လဲ အလုပ်များနေလားလား ဒီရက် သိတ်မတွေ့လို့။ :-))
အင်းတားတို့ မဂ္ဂဇင်းထဲ ထည့်သုံးရင်ကောင်းမလားမသိဘူး..။ ဘောစိကို ပြကြည့်ဦးမှဘဲ။
YKKO လို ဆိုင်ကြီးတွေတောင် အဲ့လိုဆို